Da’yarta kelinimada ku timid oo loo dheereynayo sharciga deganaansho - Radio Sweden Somali - Raadiyaha Iswiidhen | Sveriges Radio
La daabacay torsdag 4 maj 2017 kl 10.16
Banaanbax lagu taageerayo da'yarta kelinimada dalka ku yimid oo horey loogu qabtay Stockholm. sawir: Johan Nilsson/TT
Wax ka baddelka sharciga ayaa yimid kadib markii ay xukumaddu soo bandhigtay hindise sharci oo arrintan ku saabsan taas oo dhaleeceyn badan kala kulantay hey’adahii loo gudbiyey si ay uga soo talo baxiyaan.
Laakiin guddi hoosaadka baarlamaanka ee arrimaha bulshada ayaa tageeray hindisaha xukumadda oo suurogeliyey in xukumaddu ku guuleysato codeyn baarlmaanka shalay u qaadey sharcigan sidaasna uu ku meel mariyey.
Bisha lixaad kowdeeda ayuu wax ka baddelkan cusub dhaqan galayaa.
Sharciga cusub waxuu quseeyaa da'yarta kelinimada dalka ku timid waxii ka dembeeyey 24 november 2015 ee jirin cid waddamadoodii ku qaabilaysa haddii dib loo celiyo.